Hello Nepal News » यस्तो पनि : ४२ वर्षसम्म भूतले बन्द गरायो रेल स्टेसन !
यस्तो पनि : ४२ वर्षसम्म भूतले बन्द गरायो रेल स्टेसन !
सुन्दै अचम्म ! भूतले रेलको स्टेसन बन्द गरेको सुन्दा पत्याउन सकिँदैन । तर, यस्तै भएको छ । तर, हाम्रै छिमेकी देश भारतमा एउटा रेल स्टेसन भूतकै कारण ४० वर्षसम्म बन्द भएको खुलासा भएको छ ।
त्यहाँको पश्चिम बंगालस्थित पुरुलिया नामको जिल्लामा रहेको बगुनकोडोल रेलवे स्टेसन सन् १९६० मा चालु भएको थियो । त्यसको ७ वर्षपछि सन् १९६७ मा उक्त स्टेसनका एक कामदारले स्टेसनमा महिलाको भूत देखेको दाबी गरे । पछि त्यो हल्ला सबैतिर फैलियो ।
नभन्दै केही समयपछि रेल स्टेसनका इन्चार्ज र उनको परिवारका सदस्यसमेत रेलवे स्टेसनको कर्मचारी बस्ने घरमै मरेको अवस्थामा भेटिएपछि भूतको हल्ला र क्रास झन् फैलियो । त्यहाँका मानिस स्टेसन क्षेत्रमा बेलुकी भएपछि भूत घुम्ने गरेको बताउँथे ।
यस्तो दिन आएपछि त्यो रेल स्टेसनमा यात्रु झर्न र त्यहाँबाट चढ्न पनि छाडे । रेल चालकले त्यो स्टेसनमा रेल रोक्न छाडे । यो खबर देशैभरि फैलियो । त्यसैबेलादेखि सो रेल स्टेसन बन्द नै भयो ।
तर, स्टेसन बन्द भएको ४२ वर्षपछि सन् २००९ मा तत्कालीन रेलमन्त्री ममता बनर्जीले गाउँलेहरूको सहयोगमा रेल स्टेसन पुनः चालु गराएकी थिइन् । आजभोलि सो स्टेसन खुला त छ तर अहिले पनि मानिस साँझको समयमा न त्यहाँ झर्छन्, न चढ्छन् नै । यतिसम्म कि, कर्मचारीसमेत त्यहाँ बस्दैनन् ।
प्रकाशित मिति ७ माघ २०७६, मंगलवार १५:४७